သောင်းပြောင်းထွေလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 407
Maung Luu Yay – မီးနှင့်ပတ်သက်၍ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်
မောင်လူရေး၊ မေ ၂၆၊ ၂၀၁၂ မီးမဲ့တိုင်းသား လူအများတို့လေ … သမ္မတအကြွင်းပေး ကိုကိုလှိုင်၏ အကြွင်းပေးမှုအရ မီးချွေတာရေးလုပ်သည့်အနေဖြင့် နေပြည်တော်တွင် မတော်မလျော်ထွန်းထားသည့် မီးလုံး မီးဆိုင်းအားလုံး ဖြုတ်တန်ဖြုတ် ခွဲတန်ခွဲ လှဲတန်လှဲ ဖြိုတန်ဖြိုရေး အခုမနှေးဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူ ဟူ ဟူ….. နေပြည်တော်နှင့် ဟော်တယ်များ၊ ခေတ်ပျက်သူဌေးများအိမ်နှင့် ယင်း ကိုင်ကိုင်လှို၏ အိမ်မှာ တပ်ထားသမျှ အဲယားကွန်းများကိုလဲ ဖြုတ် ဖျက် ပစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူ ဟူ ဟူ….. ဘုရားမီးများကိုလဲ နေရောင် လရောင်နှင့်သာ ပူဇော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူ ဟူ ဟူ… အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေလဲ လသာတုန်းဗိုင်းငင်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူ ဟူ ဟူ… .. ကွန်ပြူတာများအစား ကျောက်သင်ပုန်းစစ်စစ်များကိုသာ သုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူ...
ကာတွန်းစောငို – ဖယောင်းတိုင်နဲ့အတူ သူတို့ကို ထားရစ်ခဲ့ မေ ၂၆၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ကျော်သူရိန် မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပန်းသီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာသ – Pan Thee
မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂ သမ္မတနှင့် ပန်းသီး သမ္မတ ။ ။ မင်းကလူရွင်တော်ဆိုတော့ မင်းကိုဥာဏ်စမ်းရမယ်။ မင်း ငါ့ကိုအရီရဆုံးနဲ့ အငိုရဆုံးပြောပြစမ်းကွာ…ပန်းသီး။ ။ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဗုံးခဏခဏပေါက်တော့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေရတယ်ဗျာ။ သမ္မတ။ ။ ဟင့်..ဟင့် ငါလဲစိတ်မကောင်းပါဘူး..မင်းပြောတာငါငိုရတယ် အရီရဆုံးပြောပါဦး ပန်းသီး ။ ။သမ္မတကြီးခင်ဗျာ မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ၂၄ နာရီမီးမှန်နေပြီတဲ့…. သမ္မတ ။ ။ ဟားးးးဟား….ဟား…..ဟိုက် … သေးထွက်ကုန်ပြီ။ မီးစိတ္တဇ စိတ္တဇဆေးရုံတွင် ဒေါက်တာပန်းသီးမှ လူနာများအခြေအနေများသိလို၍ စိတ်တ္တဇလူနာများကို TV မပါဘဲ remote တခုစီပေးထားပြီး ဂိမ်းကစားခိုင်းလေသည်။ လူနာအကုန်လုံးက remote ကိုင်၍ ဂိမ်းကစားနေသော်လဲ လူနာတယောက်မှာ ဂိမ်းမကစားဘဲ ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့၍...
Saw Ngo – ဖယောင်းတိုင်နဲ့ လျှပ်စစ်(ပါဝါ) ကို အစားထိုးမယ်တဲ့လား
ကာတွန်း စောငို – ဖယောင်းတိုင်နဲ့ လျှပ်စစ်(ပါဝါ) ကို အစားထိုးမယ်တဲ့လား … ဟားဟားဟား မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ရန်လိုကျွဲ မေ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု သွားတက်သည်။ အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အကြံပေးအရာရှိများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – သောက်ရူးဝန်ကြီးကို ထိုးမလို့ … တဲ့ မေ ၂၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး မေ ၂၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – စောငို မေ ၂၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 407 of 423«1...405406407408409...423»
ကာတွန်းစောငို - သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်လှစ်ပြီ (၂၀၀၇)
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month June 2018 (135) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ပန်းချီ ဇော်မိုးသည်း ပထမဆုံးတကိုယ်တော် ပြပွဲ ရန်ကုန်မှာ ၃ ရက်ကြာ ပြသမယ် https://t.co/KB4XRLY4Lw https://t.co/bn1qsqGswg about3minutes ago ReplyRetweetFavorite
စမ်းစမ်းတင် – တွံတေး၊ ဆူးအက်နဲ့ ကရာတူးမြောင်း တွေက ပေးတဲ့အတွေး https://t.co/dBnuR0prEC https://t.co/3sEpvg6dnc about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် လူငယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲ ဇွန်၂၄ https://t.co/cuI3AIqEap https://t.co/qtTi71gf3S about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite